Accueil > Gazetin'ny nosy > Enga anie tsy ho diso fiantefa !
Enga anie tsy ho diso fiantefa !
Nanao antso ny filohampirenena Rajaonarimampianina tany Toamasina ny zoma teo hoe « tsy azo andeferana fa sambory izay manararaotra ny vidim-bary ». Tsy tokony ho nambara imasom-bahoaka toa ireny izany. Sa raha tsy miteny an’ireny tsy azo ambara ho miasa ny fitondrana ? Ny ahiana mantsy dia hisy hanararaotra na handray an-tendrony ireny teny miendrika baiko ireny, ka tondro-molotra dia mety hahitana angano. Zary lasa fitsaram-bahoaka e ! Mampahatsiaro ny teny nataon-dRavalomanana tamin’ny hetsi-bahoaka 2002 hoe « hatao hazalambo fa fahavalom-pirenena ». Ny mpiara-dia rehetra tamin’ny Amiraly Ratsiraka tamin’ireny dia saika nidiran-doza na ireo nahatsiaro tena ka nanapa-kevitra ny hiara-dia amin’ny vahoaka aza. Raha ny marina dia ry zareo ao an-dapa ao ihany ange no tena mahita sy mahazo tombontsoa manokana amin’io resaka vary io, ary ny fanafarana azy ireny dia itsikombakombany amin’ireo vahiny mpandraharaha toy ny karana e ! Noho izany, azon’ny filohampirenena natao ny nanome baiko tany anaty rafi-pitondran-draharaham-panjakana tany mba tsy handefitra amin’ireo mpanararaotra, saingy rehefa tena zohiana izany resa-bary izany, dia tsy hisy hifampisambotra izany raha mpiray tsikombakomba, fa misy olona hafa tian-dry zareo hosamborina indray any dia amoronan-dresaka ho manafim-bary na mampidangana vidim-bary.
Fitsarana: Mikorontana ambony ambany
Tsy milamina intsony ny fanjakana eto Madagasikara. Taratry ny tsy filaminan’ny fanjakana ny korontana mitranga ao amin’ny fitsarana ankehitriny io. Mbola azo nekena ny kolikoly avolenta niteraka resabe teo amin’ny mpitondra ambony tao amin’ny governemanta sy ny mpitondra fanjakana ambony tao anatin’ny fitondrana misy amin’izao fotoana izao ity. Nanomboka ny taona 2014 nitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina dia niaina tao anatin’ny tsy filaminana ara-politika ny vahoaka Malagasy. Nitranga eo amin’ny lafin’ny fiarahamonina amin’ny ankapobeny izany ka isan’ny nanamarika izany ny tsy fandriam-pahalemana izay nahazo vahana tanteraka. Tsy ny ambanivohitra, tsy an-tanàn-dehibe fa tsy misy andro mihiratra mihitsy na kely aza. Ny mpitondra fanjakana ihany sisa no afaka miaron-tena sy ny fianakaviany. Ny sisa rehetra dia mandry andriran’antsy avokoa.
Endrikin’ny korontana eto amin’ny firenena ireo. Miakatra dingana ambony nefa isika nanomboka ny taona 2018 ity ary nanao dingandava tanteraka noho ny raharaha misy ao amin’ny fitsarana noho ilay raharaha Houcine Arfa, izay gadra nandositra avy ao amin’ny fonjan’i Tsiafahy ka tafavoaka any Frantsa amin’izao fotoana izao. Nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety ity frantsay ity izay voalaza fa mpanolotsaina manokan’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ity ka nogadraina fa nolazaina fa hanongam-panjakana.
Raha tsy hijery raha tsy ny raharaham-pitsarana sy ny fiainanan’ity ministera ity isika dia azo lazaina fa ity fitondrana misy an’ingahy Hery Rajaonarimampianina ity no nitrangan-tsapona be indrindra.
Tamin’ny raharaha Claudine Razaimamonjy dia nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety tamin’ny 10 ora alina ingahy minisitra Andriamiseza Charles, izay niaro ity ramatoa ity raha fitinina ny teniny. Nanameloka ny fomba nisamborana azy, nefa moa dia io iarahana mahita io ny raharaha fa tsy nanaiky ny Bianco ka dia io mbola miandry ny tohiny ny rehetra satria mbola misy olona maro koa mbola andrasana hanaovana fanadihadiana amin’ity raharaha ity, ary zavatra hafa koa no mbola anenjehana azy.
Tamin’ny herinandro lasa teo iny dia nanambara tamin’ny mpanao gazety ny lehiben’ny fampanoavana eto Antananarivo ramatoa Odette Balisama Razafimelisoa ny alakamisy faha 18 janoary 2018, fa tonga tao aminy tokoa ingahy Houcine Arfa, izay natrehan’ny lehiben’ny police mpanao famotorana iray ka nitondra vola tamin’ny harona mba homelana azy hivoaka ny fonja, nefa tsy nanaiky izany ity ramatoa ity fa nandefa azy any amin’ny minisitry ny fitsarana.
Ny minisitry ny fitsarana Elise Alexandrine Rasolo dia nanao valan-dresaka hoan’ny mpanao gazety ny talata faha 9 janoary 2018 dia nilaza fa handefa fisamborana iraisam-pirenena amin’ity raharaha ity. Ho valin’ny tenin’i Minisitra dia nivoaka tamin’ny alatsinainy faha 15 janoary 2018 ingahy Houcine Arfa tamin’ny “TV Parisien”. Nolazainy tamin’izany fa “70 000 euro” na 280 millions ariary raha kaotiany 4000ar ny “euro” iray. Mbola misy koa olona hafa izay tenenin’ity gadra nandositra ity fa nandray izany vola izany, ka isan’izany ireo lehiben’ny mpiandry fonja eto Antananarivo. Misy olona hafa koa amin’ny sehatrin’ny fitsarana lazainy fa nandray vola taminy koa.
Teo anatrehan’izany dia nanao fanambarana an-gazety ramatoa filohan’ny sendikan’ny mpitsara Malagasy SMM Fanirisia Erinaivo tamin’ny sabotsy faha 20 janoary 2018 fa tokony hisy ny fanadihadiana manokana ity raharaha Houcine Arfa ity satria manalabaraka ny fitsarana tanteraka ity raharaha ity ary koa ny fanjakana Malagasy. Noho izany dia tsara ny hahalalana ny marina rehetra amin’ity raharaha ity mba hampadio ny fitsarana.
Mahatsapa ity filohan’ny SMM ity fa mihena be dia be ny fahatokisan’ny vahoaka ny fitsarana ankehitriny ka tokony harenina izany.
Mbola nolazain’ity ramatoa filohan’ny SMM ity Fanirisoa Erinaivo fa misy mpitsara namany nahita an’i ramatoa Claudine Razaimamonjy tany Fianarantsoa sy Ambalavao tamin’ny fetin’ny krisimasy sy ny taom-baovao 2018 iny. Tokony hasiana fanadihadiana avokoa izany.
Izany no ilazana fa mikorontana tanteraka ny fitsarana Malagasy. Tranga iray ao anatin’ny zavatra maro izao. Raha tonga amin’izao sehatra misy ny fitsarana ankehitriny izao isika dia midika fa tsy izy intsony ny fanjakana mitondra eo. Ny fitsarana no fandrefesana ny fahamarinan-toeran’ny fitondrana. Tokony hisy fanovana haingana hataon’ny filoham-pirenena noho izany ary handraisana andraikitra haingana fa ny zavatra toa izao dia miteraka krizy amin’ny firenena iray.